ARDAY WAXBARASHADA CAGAJIID KA AHAA OO HADANA UGU SAREEYEY NATIIJADII IMTIXANKA DALKA | Toggaherer's Weblog
WAR DEG DEG AH: DAGAAL KA QARXAY DEEGANKA U DAHXEEYA GABILEY IYO AWDAL
Cabdi Axmed Maxamed, oo noqday ardayga ugu sareeya natiijadii imtixaanka wadanka ee sanadka 2008, oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano KCPE exams ayaa ku baxay dhibco dhan 434 iyada oo totalka guud ahaa 500 oo dhibcood. Sawirkan idiin muuqdaa waa wiilka iyo ayaydii oo runtii ahayd tii ka dambeysay guusha waxbarashadiisa. Warbixintan oo laga soo xigtay jariirada caanka ee ka soo baxda dalka Kenya oo loo yaqaano DAILY NATION ayaa waxa uu u dhignaa sidan.
Cabdi Axmed Maxamed oo 19 jir ah, waxa uu wax barashada hoose dhexe bilaabay isaga oo 12 jir ah, laba jeer ayaa laga eryay iskoolka, se waxa uu ku dhameeyay waxbarashada hoose dhexe mudo afar sano ah halkii loogu talo galay in uu ku dhameeyo sided sanadood caadiyan. Ardaygan ayaa waxa uu ciladiisii oo dhami hadhay markii uu ugu sareeyay natiijadii imtixaanka hoose dhexe ee gobolka waqooyi bari oo dhan (2008 Kenya Certificate of Primary Education examination).
Maxamed waxa uu ku soo qaatay noloshiisii oo dhan gobolkaas, waligiina cag muu dhigin caasimada dalka ee Nayroobi, halkaas oo uu imika ku biiray machadka loo yaqaano Starehe Boys Centre in Nairobi oo uu ka helay deeq waxbarasho oo ah afar sano sababta oo ah natiijadiisa fiican ee uu ku baxay.
Warxumoo dhan waa iska reebay:
Ka dib markii laga eryay iskoolka laba jeer, Maxamed waxa uu iska reebay war xumoo dhan ka dib markii uu noqday ardayga ugu sareeya imtixaanka gobolkaas. Gobalkan ayaa ah gobol ay u badanyihiin reer guuraagu ahna abaar oo ay ku yar yihiin biyaha roobku. Runtii abaaraha iyo wakhtiyada adag ee uu gobolkanu ku jiro ayaa ah mid qayb ka ciyaarta wax barasho xumida gobolku uu caanka ku noqday marka loo eego gobolada kale.
Maxamed oo ka dhashay family 10 caruur ah leh, ayaa isagu ah ka kaliya ee nasiibka u yeeshay in uu wax barto. Mahadi ha u sugnaato ayaydayda 70 jirka ah taas oo go’aamisay suuro galna ka dhigtay in ay waalidkay ka dhaadhiciso in ay igu daraan iskoolka anigoo 12 sano jir ah. Sida caruur badan oo qayrkay ah ayaanay ii suurto galin in aan si xidhiidh ah u dhigto wax barashadayda waayo reerkayagu waa reer guuraa, se waxa aad iigu dheer dedaalka ay ii gashay ayayday in aan wax barto. Sidaas waxa yidhi Maxamed.
Macalimiinta iskuulkiisii kowaad oo ku yaalay meel u dhaw xadka Kenya iyo Somalia ayaa aad iyo aad uga cagajiiday in ay qoraan fasalka kowaad, sababtoo ahayd isaga oo dadiisa iyo jidhkiisu aad uga waynaa ardayda loogu talo galay sanad dugsiyeedka koowaad, waxa ay se aakhirkii go’aan ku gaadheen in ay uga bilaabaan iskuulka fasalka 3 aad. Sanad ka dib Maxamed waa ka cararay wax barashada waayo waxa uu ahaa qal qaali dhaaf, waanu la qabsanwaayay wax barashadii waxaanu ku noqday miyigii iyo in uu iska raaco riyahoodii.
Markii uu ka cararay wax barashada ayaa waxa ka daba tagtay ayaydii mar kale oo ku soo celisay wax barashadiisii, waligay ismaan lahayn wuu guulaysanayaa markaan dib u eego qalqaalinimadiisa iyo dabeecadiisa sidaas waxa tidhi ayaydii oo aan mar kaliya ka quusan in uu wax barto. Kadib wakhti badan oo uu lumiyay, sanadii 2004 ayaa ayaydii waxa ay go’aan ku gaadhay in ay ka soo wareejiso miyaga soona dajiso magaalada Garisa oo ay ku noolayd iyadu. Aad ayay ula talisay waxaanay tustay wax yaabaha iyo hantida ay samaystaan dadka wax bartaa, waxaanay sidoo kale bartay dad badan oo mudan in lagu daydo oo uu ka mid yahay ku xigeenka afhayeenka barlamaanka Kenya Mr. Faarax Macalim. Faarax markii uu maqlay sheekada wiilkan ayuu ugu deeqay wiilka in uu wax barasho free ah ka bixin doono. Balse waa diiday wiilki in uu qaato deeqdaa wax barasho oo waa ka caga jiiday, se ayaydiisa madaashada ahayd ayaa ka dhaadhicisay inuu qaato waxna barto.
Iskoolkii Gaarka ahaa:
Maxamed oo ka sheekaynaya deeqdii wax barasho, ayaa waxa uu sheegay in la mariyay imtixaan si loo ogaado heerka uu ku haboonyahay wax barasho ahaan, waxaanu ku soo baxay fasalka 6aad in uu ku haboonyahay.
Si hadaba loo kabo wakhtigii ka lumay wiilka ayaa waxa uu Faarax u qabtay macalin guri oo caawiya, sidaas ayaanu maxamed dedaalkisa awgiis ku noqday ka ugu sareeya wax barashada fasalkisa.
Maanta, ka dib 4 sanadood wax barashadiisii u horaysay, Maxamed aad iyo aad ayuu ugu bogay wax barashada, waxaanu balanqaaday in aanu lumin doonin fursad dambe, higsigiisana waxa uu doonayaa in uu noqdo Injineer ka guryaha iyo wadooyinka dhisa (civil Engineer). Sababta ka dambaysa in aan doorto qaybtan wax barasho ayaa ah, waxaan arkay sida ay u liidato wadooyinka gobolkaygu guud ahaan.
Mudiirkii iskoolkiisii hore ee Garisa Mr Charlis Juma, ayaa sheegay in uu wiilkanu koobsaday laba arin oo ah edaab iyo hawl karnimo, taas oo sababtay in aan cabtan uga dhigo Iskoolka dhan.